Maxay tahay sababta keentay inay Somaliland joojiso dabaaldagii ay u sameyn jirtay maalintii ay Soomaaliya ka goysatay? - Caasimada Online
Home Warar Maxay tahay sababta keentay inay Somaliland joojiso dabaaldagii ay u sameyn jirtay...
Maxay tahay sababta keentay inay Somaliland joojiso dabaaldagii ay u sameyn jirtay maalintii ay Soomaaliya ka goysatay?
Hargeysa (Caasimadda Online) – 18 May 1991 waa maalintii ay Somaliland sheegtay inay ka goosatay Soomaaliya inteeda kale, waxaana sanadkaan la sheegay inaan la qaban doonin dabaal dagyo ku aadan maalintaas Sida uu ka dhawaajiyay Wasiirka Warfaafinta Maamulka Somaliland Cusmaan C/llaahi Saxardiid “Cadaani”.
Sababta keentay in sanadkaan la joojiyo xuskaas ayuu wasiirka ku sheegat in sanadkaan ay jirto abaar aad u daran , dad badanna ay gaajo u dhimanayaan sidaasi darteedna aanay habooneyn in la mashxarado abaarta ka jirta Soomaaliland darteedna sanadkaan loo joojiyay dabaal degyadii 18-ka May, taasina ay noqon doonto sumcad darro.
Isagoo hadalkiisa sii wato Cadiina ayuu intaas ku daray in Maamulka Somaliland uu go’aamiyay in sanadkaan aan la dhigin dabaal degyadii 18 May, sidaas darteed wixii dhaqaale ee ku bixi jiray dabaal degyada loo wareejinayo gurmadka abaaraha, waxaana tallaabadaas ku tilmaameen inay tahay mid ku dayasho wanaagsan.
Dhanka kale waxaa uu ugu baaqay qurba joogta qaban jirtay xafladaha dabaal dega 18 May inay u bedelaan qaaraan-uruurin, si wax loogu qabto dadka ay saameeyeen abaaraha ee soo barakacay, maadaama Somaliland ay ka mid tahay meelaha sida daran ugu dhufatay abaaraha.
Ilaa muddo 26 sano ah Somaliland ayaa raadineysay aqoonsi caalami ah balse ilaa hadda ma jiro hal wadan oo Somaliland u aqoonsaday inay tahay meel ka madax banaan Soomaaliya.